साधारण रुघाखोकी र कोरोना भाइरसको संक्रमण कसरी छुट्याउने? – Lokpati.com
प्रचण्ड चितवन मृत्यु सरकार नेपाल प्रहरी केपी शर्मा ओली राशिफल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अमेरिका नेकपा पक्राउ नेपाली काँग्रेस अपराध
काठमाडौं, ८ जेठ। कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका प्रारम्भिक लक्षण तथा साधारण रुघाखोकीका लक्षणहरू मिल्दाजुल्दा भएकाले कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने भन्ने कुराले सर्वसाधारणलाई अन्योलमा पारेको छ। केही सातायता देशका विभिन्न स्थानमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको बेला सर्वसाधारणलाई कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण र रुघाखोकी छुट्याउन अप्ठ्यारो परेको देखिएको छ।
अहिले सबै प्रदेशमा कोरोनाभाइरस पुगेको पुष्टि भइसकेको छ। बाँके, पर्सा, उदयपुर, कपिलवस्तु, झापा र रौतहट जिल्लमा बढी प्रभावित भएका छन्। तर मौसम परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा साधारण रुघाखोकीको समस्या पनि सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन्।कोभिड-१९ सँग केही समान लक्षण भएकाले सर्वसाधारणहरू रुघाखोकी लाग्दा पनि त्रसित हुने गरेका छन्।
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका लक्षणका बारेमा बताउँदै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक डा। अनुप बाँस्तोलाले भने, ”कोभिड-१९ मा मुख्यतया सुक्खा खोकी लाग्छ।”
”सुक्खा खोकी लागेको पाँच दिनजतिमा निमोनिया हुनसक्छ। त्यसपछि केही व्यक्तिहरुलाई साह्रो हुनसक्छ र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ।”
छालामा समस्या आउने तथा गन्ध थाहा नपाउने पनि कोभिड-१९ का लक्षण भएको डा. बाँस्तोला बताउँछन्।
उनले भने, ”अहिलेको परिस्थितिमा यदि रोगग्रस्त क्षेत्रका मानिसहरूसँग सम्पर्क भएको छ र लक्षण देखियो भने चिकित्सकको सल्लाह लिनु नै राम्रो हुन्छ।”
”अझ सास फेर्न गाह्रो हुने, उच्च ज्वरो आउने लक्षण छ भने त अस्पताल जानैपर्छ।”
उनले भने, ”सङ्क्रमितलाई त आइसोलेशनमा राख्नैपर्छ। त्यो पनि विशेष आइसोलेशनमा। कोठामा राख्छौँ, बाहिर निस्कन दिँदैनौँ।”
”खानेकुरा खान दिने हो। बिरामीलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो भने पीपीई लगाएर जाँच गर्न जाने हो। उहाँहरूलाई दिइएको खानेकुरा ९बाँकी भए० र खान दिएका सामान जलाउनुपर्छ। सरफफाइमा विशेष ध्यान दिने हो।”
रुघाखोकी लाग्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?
घरमा कसैलाई रुघा लागे वा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण पाइए परिवारका अन्य व्यक्तिसँग भौतिक दूरी बढाउन चिकित्सकको सुझाव छ। आवश्यकताअनुसार मास्क लाउन, भरसक अलग भान्छाकोठा र शौचालय प्रयोग गर्न वा बिरामीलाई भौतिक दूरी कायम गरेर खाना दिने तथा छुट्टै कोठामा सुत्ने व्यवस्था गर्न मेची अस्पतालका चिकित्सक डा. पिताम्बर ठाकुरले सुझाव दिएका छन्।
उनले भने, ”यति कुरा घरमा गरे कोभिड-१९ पनि फैलिने सम्भावना कम हुन्छ।” तर रुघाखोकीसँगै सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने र अन्य लक्षण देखिए तुरुन्त अस्पताल जान उनको सुझाव छ।